Fandraharahana : vonona hampiasa vola eto ny Vondrona Ragec, aty Afrika | NewsMada
Fandraharahana : vonona hampiasa vola eto ny Vondrona Ragec, aty Afrika
Mpandraharaha libaney avy amin’ny Vondrona Ragec no noraisin’ny minisitry ny Indostria sy ny fampandrosoana ny sehatra tsy miankina, omaly. Naneho ny fahavononany hampiasa vola eto Madagasikara ireo vahiny libaney ireo.
Tonga eto amintsika ireo mpitantana ao amin’ny Vondrona Ragec, orinasa libaney, miasa amin’ny firenena maro aty Afrika. Efa nitsidika ny orinasan’izy ireo miasa ao Zambia ny filoha Rajaonarimampianina tamin’ny fandalovany tany an-toerana, ka izao izy ireo tonga eto amintsika izao. Noraisin’ny minisitry ny Indostria, Chabani Nourdine, nifampidinika amin’ny tokony hatao eto an-toerana izy ireo. Ny Vondrona Ragec, mampiasa vola mahakasika sehatra maro, toy ny fambolena, fizahantany, indostria, sy ny maro hafa, ka mbola tsy nilaza aloha izy ireo izay sehatra hidirany fa efa naneho kosa ny fahavononany hampiasa vola eto Madagasikara.
Mbola hisy fanadihadiana hataon’ireo teknisianina avy ao aminy, hijery izay tokony hampiasam-bola sy ny faritra hanaovana izany. Afaka 10 andro, raha ela indrindra, ho fantatra ny valin’izany fanadihadiana izany, ary amin’izay fotoana izay ny hilazan’izy ireo izay mahasarika azy voalohany. Manana ny traikefany rahateo ny Vondrona Ragec aty Afrika, any amin’ny firenena maro, tsy mifidy faritra na teny fampiasa.
Nanamafy ny minisitra Chabani Nourdine fa vokatry ny fivoahana any ivelany, mitady mpandraharaha hiditra eto amintsika izao fahatongavan’ny vahiny izao. « Matanjaka io Vondrona Ragec io aty Afrika amin’ny sehatra rehetra, koa ilaintsika ny fiaraha-miasa amin’izy ireo, hiteraka asa vaovao anarivony eto an-toerana », hoy ny minisitra. « Eto amintsika, tsy ampy ny hoenti-manana, ka nampahalala ihany koa ireo vahiny ny amin’ny fahavononany hiara-miasa amin’ny mpandraharaha malagasy », hoy ihany ny minisitra.